> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka a DVD Player
MOV bụ a faịlụ Ọkpụkpọ na ịchekwa dijitalụ videos na elu definition na ọtụtụ ndị na-eji na camcorder ndia. Ikiri QuickTime MOV faịlụ na DVD ọkpụkpọ bụ oké nhọrọ n'ihi na ọ pụrụ ngwa-ngwa-ọsọ na laghachi ọsọ karịa VCRs na nwere nnukwu-definition ndakọrịta. Otú ọ dị, QuickTime MOV faịlụ na-adịghị DVD ọkpụkpọ natively akwado format, i kwesịrị iji tọghata ha n'ime kwesịrị ekwesị DVD Ọdịdị faịlụ. Ke ibuotikọ emi, ị ga-amụta abụọ mfe na ngwa ngwa ngwọta.
Ngwọta 1: tọghata MOV ka a DVD onye na Mac na Windows
Ngwọta 2: Ọkụ MOV ka DVD ọkpụkpọ na na Mac na Windows
Ngwọta 1: tọghata QuickTime MOV ka a DVD onye na Mac na Windows
Iji tọghata MOV ka DVD onye na Mac na Windows, ị chọrọ a siri ike ma dị mfe iji video Ntụgharị dị ka Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Ọ na-enyere gị tọghata ọ bụla video azụ na-apụta n'etiti tọn video formats na ngwa na lossless àgwà na 30X akakabarede ọsọ.
Free download ikpe mbipute ebe a:
Na mfe 3 nzọụkwụ, ị ga-mezue akakabarede seamlessly:
Nanị ịdọrọ na dobe gị MOV faịlụ kpọmkwem n'ime usoro ihe omume window.
Pịa mmepụta format ịhọrọ WMV (n'ihi na Windows DVD onye), ma ọ iDVD (n'ihi na Mac OS) dị ka mmepụta usoro.
See tọghata bọtịnụ mgbachapụ MOV ka DVD onye akakabarede.
Mgbe ahụ akakabarede, ị ga-esi WMV faịlụ ma ọ bụ iDVD MP4 vidiyo na magburu onwe ya mma. Ugbu a, ị nwere ike ịga n'ihu na-ere ọkụ nke converted faịlụ na Windows DVD Onye kere ma ọ bụ Mac iDVD karị. N'ihi na otú ọkụ MOV ka DVD na DVD onye na Windows, biko rụtụ aka na a nkuzi. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko ego ebe a ịmụta otú ọkụ MOV ka DVD na iDVD.
Cheta na: N'ihi na Mac onye ọrụ, i nwere ike ịgbalị iDVD ka ọkụ gị MOV faịlụ n'ihu converting ha. Dị ka anyị maara na ọ bụ nanị H.264 (.mp4) na MPEG-4 (.mp4) na-nabatara iDVD na Mac-agba ọsọ Mac OS X Snow agụ owuru, odum, Mountain Odum, wdg Ọ bụrụ na gị MOV faịlụ na-adịghị ghọtara site gị iDVD, biko gbalịa n'elu kwuru banyere video Ntụgharị maka Mac.
Ngwọta 2: Ọkụ QuickTime MOV ka DVD ọkpụkpọ na na Mac na Windows
Isure MOV ka DVD ọkpụkpọ seamlessly na ngwa ngwa na-enweghị transcoding, ga-amasị m ịkọrọ a oké omume thata atọghata ọ bụla nkiri faịlụ jidesie a DVD disk, DVD nchekwa, ma ọ bụ ISO oyiyi faịlụ. Ọ na-enye 90 tent nke free animated na static DVD menu ekwekọghị, na awade a Mee na-video nchịkọta akụkọ nke na-enyere bugharia, akuku na ewepụtụ video faịlụ wepụ letterboxing, akuku ma ọ bụ weghara ọkacha mmasị gị Obere vidiyo. Nke ahụ bụ DVD Creator (DVD Creator for Mac). Download free ikpe ebe a:
1 Tinye MOV faịlụ
Dọrọ na dobe QuickTime MOV videos ozugbo na isi omume windows wee pịa "↑" na "↓" megharia iji.
2 Họrọ DVD menu na dezie MOV faịlụ (Nhọrọ)
Pịa "NchNhr" button na ala nri ala nke isi interface ịbanye menu edezi window. Ebe a, ị nwere ike ịhọrọ site karịrị 90 tent nke free animated na static DVD menu ekwekọghị ma ọ bụ nanị họrọ "Ọ dịghị NchNhr".
Iji na-ede akwụkwọ gị MOV videos tupu ere ha, dị họrọ pịa pensụl na akara ngosi n'akụkụ ọ bụla video / foto ngosi mmịfe ma ọ bụ mata clip na nri pịa ịhọrọ Dezie nhọrọ ka ịnweta edezi window.
Mgbe imecha niile authoring ọrụ, ị nwere ike pịa "Preview" iji lelee ma ọ bụrụ eveything aga dị ka amasị gị. Mgbe afọ ju, dị nnọọ pịa Ọkụ iji tọghata MOV ka DVD ọkpụkpọ. Tupu ọkụ, biko cheta TV Standard: Họrọ "NTSC" ọ bụrụ na ị na-ebi USA, Canada na Japan na-ahọrọ "PAL" maka ndị na-ebi na Europe na Asia mba.
Ọkụ QuickTime MOV ka DVD ọkpụkpọ Atụmatụ:
DVD Creator (DVD Creator for Mac) Na-akwado niile ewu recordable diski ụdị: DVD-5 na DVD-9; DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD-Ram. Otú ọ dị, ọ bụ ihe amamihe na-ahọrọ DVD-R ka mmepụta, na-akpata na ọ bụ ukwuu dakọtara na n'ụlọ DVD egwuregwu. N'ihi na ihe ọmụma banyere DVD discs, biko rụtụ aka na a isiokwu.
Desktọpụ vs Online MOV Ntụgharị (QuickTime)
Olee otú Ọkụ ọ bụla Video ka DVD on OS X Mavericks
Top 10 Nkiri DVD nwetara kachasi Search nti na 2014
NTSC ka Pál Ntụgharị: Olee otú iji tọghata NTSC ka PAL (Windows 10 gụnyere)
Olee otú Jiri DVDStyler DVD authoring Software
Free DVD NchNhr Templates na DVD kpatụ aka gaa na